Igumbi elinye elikhanyayo / amawele ukuba uvumele
Wamkelekile ngokufudumeleyo eManor Hill. Nceda uqaphele 'INDAWO' yam yi-Ballincollig, eyi-9KMS (malunga) ukusuka kwisiXeko saseCork. Ikufuphi nesikhululo sebhasi esiya esixekweni rhoqo ngemizuzu engama-30 & ngexabiso le-euro eyi-4.00 yokubuya (220/220x ibhasi). Ezinye iindwendwe zifumana le nto ingalunganga kwaye zicinga ukuba indawo endikuyo sisixeko saseCork-ke qwalasela phambi kokubhukisha !! Zincede ufikelele kwisidlo sakusasa sakusasa esilula-isonka, iicereals, et
Ndiyakwazi ukuhlalisa abantu aba-1 (ibhedi enye) kukho nebhedi yesofa kweli gumbi, ekwaziyo ukuhlalisa omnye umntu. Kukho igumbi lokuhlambela elingaphantsi kweWC (hayi ishawari) Ishawari iphezulu kwizinyuko kwigumbi lokuhlambela elikhulu. Njengoko iligumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, kwaye ngomdla wokuthuthuzela kweendwendwe, akukho kuzilazila kwishawari nceda! Kwaye akukho mvula emva kwe-10 p.m. okanye phambi kwentsimbi yesi-7 kusasa.
Indawo yethu yindawo ethule kakhulu kwaye eyonwabisayo-kwaye siyazingca ngaloo nto ke uqinisekisiwe ukuba uhlala ngoxolo.
Ndiyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe; nangona kunjalo, ezinye iindwendwe ziyathanda ubumfihlo, endiyihloniphayo kwaye ndiyihlawule.